Thursday 2nd December 2021 08:17:20 in Wararkii Maanta by Xarunta Guud
Qabsashada magaaladaasi ay qabsadeen ciidamada dowladda ayaa noqoneysa guushii ugu dambeysay ee ay dowladdu sheegato tan iyo markii todobaadkii hore uu ra'iisalwasaare Abiy Axmed u baxay furimaha hore ee dagaalka si uu u hoggaamiyo hawlgalka ciidamada.
Jabhadda Tigreeda ee TPLF ayaa sheegtay in "xeelad" ahaan ay ka baxeen meelo gaar ah.
Magaaladaasi oo ay hay'adda Qaramada Midoobey ee UNESCO u aqoonsatay mid taariikhi ah ayaa ku taal gobolka Axmaarada ee dalka Itoobiya, waxa ayna ahayd goob loo dalxiis tago ka hor intii aysan qarxin colaadda dalkaasi muddo haatan laga joogo sanad.
Warbaahinta dowladda oo soo xiganaysa afhayeenka dowladda Legesse Tulu ayaa shalay sheegtay in militarigoodu uu sidoo kale ku kalsoon yahay in "muddo yar" ay dib ula wareegaan magaalada istiraatiijiga ah ee Dessie.
Xigashada Sawirka, Xafiiska Ra'iisalwasaaraha Itoobiya
Teleefishin u janjeera dhanka dowlada ayaa talaadadii baahiyay muuqaalka ra'iisalwasaare Abiy Axmad oo xiran tuutaha ciidaamda, isla markaana diirad ku eega dhulka buuraleyda ahi.
"Cadowgu waa la jebiyay. Hawsha noo hartay waa in aan cadowgu xididdaha u siibno oo aan baabi'inno," ayuu ku yiri askar fadhida geed hoostiisa.
Xigashada Sawirka, GOVERNMENT COMMUNICATION
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Shiinaha, Wang Yi, ayaa hadda booqasho ku jooga dalka Itoobiya, waxaana la filayaa in uu la kulmo ra'iisalwasaare ku xigeenka dalkaasi, Demeke Mekonnen, oo la wareegay shaqada maalinlaha ah ee dowladda Itoobiya maadaama Abiy Axmed uu ku maqan yahay furimaha hore ee dagaalka.
Dowladda Shiinaha ayaa ka soo horjeestay "faragelinta" shisheeyaha ku hayo arrimaha Itoobiya, xilli xukuumadda Abiy Axmed ay cadaadis xooggan kala kulmayso Mareykanka iyo qaar ka mid ah waddamada reer Yurub, gaar ahaanna arrimaha la xiriira tacaddiyo ka dhan ah aadanaha oo la sheegay in ay dhaceen intii ay colaaddu socotay.
Haseyeeshee shirkaddaTwitter ayaa sheegtay in ay wali "dhexdhexaad ka tahay afkaarta siyaasadeed iyo tan qowmiyadeed" ee dalkaasi.
Shirkadda Facebook ayaa tirtay qoraal uu boggiisa Facebook soo dhigay ra'iisalwasaare Abiy, iyadoo sheegtay in qoraalkaasi uu ku xad gudubtay shuruucdeeda ka dhanka ah hurinta rabshadaha.
[WAR HADDA SOO DHACAY:-] Madaxwayne Biixi Oo Hadda Safar Ugu Baxay Dalka Itoobiya Iyo Tuhuno Badan Oo Ka Dhashay
[Top Secret:-]Maxkamadda Sare Oo Shaacinaysa Go'aanka Laga Sugayo+Xirsi Iyo Faysal Oo Nairobi U Cararaya Iyo Xaalad
Itoobiya Oo Eedayntii Ugu Cuslayd U Jeedisay Hay'adda Caafimaadka Aduunka
[ DEG DEG:-]Urur Siyaasadeedkii Ugu Horeeyey Oo Lagaga Dhawaaqay Magaalada Borama
[WAR DEG DEG AH:-]Madax-dhaqameedka Jaarso Oo Si Wayn Uga Cawday Madaxwaynaha Deegaanka Soomaalida Itoobiya
[War Weyn:-]Kenya Oo Duulaan Kusoo Qaaday Baddii Loo Xukumay Somaliya+ Shiidaal Qodis Laga Bilaabay Iyo Talaabada Somali